ISiphepho uGastón siqinisa e-Atlantic | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UGaston, eyasuka esiphepho esishisayo yaya esigabeni sesithathu sesiphepho ngo-Agasti 28, 2016, futhi yehlela esigabeni sesibili ngosuku olulandelayo, iyaqinisa futhi e-Atlantic. Ngenhlanhla futhi, okungenani, kuze kube manje, ayiqine njengama-28 ayenayo, kepha kuseyinto yesimo sezulu egcina abantu abaningi besengozini. Kungani? Ngoba isondela kuma-Azores.
INational Hurricane Center (CNH) yase-United States, ibike ukuthi itholakala ebangeni elingamakhilomitha angama-750 (1207km) empumalanga yeBermuda namakhilomitha ayi-1445 (2325km) entshonalanga ye-Azores.
Uyabona ukuthi iSiphepho uGaston kulindeleke ukuthi sibe kuphi (sikakwe ngombala omnyama) ngoSepthemba 3.
Isiphepho uGastón sihamba ngesivinini esingu-16km / h, futhi imimoya yesiphepho efinyelela ku-185km / h isivele ibhalisiwe ngama-gust angaphezu kwe-220km / h. Yisikhathi esinamandla kunazo zonke sesiphepho sase-Atlantic, ngakho-ke kunokukhathazeka okuningi ngalokho okungenzeka. Kepha… ngabe kumele sikhathazeke ngempela? Zithini amamodeli?
Iqiniso yilokho asikho isizathu sokukhathazeka, okungenani okwamanje. Kulindeleke ukuthi ibhekise eBritish Isles, kepha nokho izinga lokushisa olwandle lapho isiphepho sizohlangana khona njengoba lisondela eYurophu liphansi kunalelo eliseTropics, ngakho-ke lokho kwengezwe kulindeleke ukuthi ukuphakama komoya kuyayenza buthaka, kakhulu, uma ifinyelela ezweni lethu, izovela ngesimo sesiphepho ogwini lwaseGalicia kuya ngempelasonto.
Ingabe isiphepho singafika eSpain?
Ngokwezibalo, amathuba okuba kwenzeke lokhu phansi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngonyaka odlule neSiphepho uJoaquín kwenzeka isimo esifanayo, kodwa ekugcineni sashiya izimvula eGalicia. Ukuthola eyodwa eyawela phansi kufanele sibuyele emuva ku-2005, lapho uVince, owathola isigaba 1.
Ngakho-ke okwamanje singazola. Kodwa kuzofanele silinde futhi sibone ukuthi iyiphi inkambo iSiphepho uGastón ethatha ekugcineni. Sizoqhubeka nokwazisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho uGastón siyaqina e-Atlantic, sizofika eSpain?